talwinsuccess-hobbyit အားလုံးမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ......: အင်တာနက်သုံးသူတိုင်းအတွက်
♥ ♥ ♥ နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ လေ့လာရန် လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ www.slip-meepyatite.blogspot.com/ = SLIP MEE PYA TITE= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://www.meepyatite.info/ = မီးပြတိုက်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့်အထွေထွေဗဟုသုတများလေ့လာရန်။ http://www.kyawswarnyein.com/ = ကိုကျော်စွာငြိမ်း = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://cadmyanmar.blogspot.com/ = CAD MYANMAR= အော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://blog.nyilynnseck.com/ = ညီလင်းဆက်=ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.mone-tine.com/ = မုန်တိုင်း= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://www.sbsangpi.com/ = IT RESHARE SITE= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.kp3family.blogspot.com/ = KP3
FAMILY=ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.nyinaymin.com/ = ညီနေမင်း= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.knowledgewar07.com/ = ကိုမိုးထက်မြင့်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.soemin.net/ = ကိုစိုးမင်း= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.kozaw357.multiply.com/ = ကိုဇော်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.htootayzar.com/ = ထူးတေဇာ= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://mmshare.org/ = MM SHARE = ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://www.myanmaritmen.org/ = အိုင်တီသမားများ= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.saturngod.net/ = စေတန်ဂေါ့= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://blog.mghla.net/ = မောင်လှ= ကွန်ပျူတာနှင့်ဓါတ်ပုံ နည်းပညာများ။ www.kokyawmyintoo.blogspot.com/ = ကိုကျော်မြင့်ဦး= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.problemclean.ning.com/ = MYANMAR IT DEVELOPMENT= နည်းပညာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့။ http://thanlonnge.net/ = သံလုံငယ်= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.simplehelp.net = မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ပြဿနာများရှိခဲ့လျှင် မေးမြန်းနိုင်သည် www.helpwithpcs.com = ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာများကို အမျိုးအစားစုံလင်စွာလေ့လာရန် www.asia-oss.net = Open Source စနစ်ကိုလေ့လာသူများ မဖြစ်မနေ၀င်လေ့လာသင့်သည် www.wwpi.com = ကွန်ပျူတာပညာရပ်များအပြင်၊ Network ပညာများကိုလည်းသင်ယူနိုင်သည် www.educational-software.com = ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည် www.educationalsoftware.co.uk = ဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များကို သင်ယူနိုင်ပါသည် www.okino.com = ဂရပ်ဖစ်သုံးဆော့ဖ်ဝဲဘာသာရပ်များစွာကို လေ့လာနိုင်သည် www.emailaccount.com = Domain များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံးချ အခမဲ့ရသော mail www.gawab.com = Language များစွာကို စိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီး လွယ်ကူစိတ်ကြိုက်ရနိုင်ပြီးလွယ်ကူသုံး ချ အခမဲ့ရသော mail www.merriam-webster.com = အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာလေးပါ www.learningpage.com = ဘာသာရပ်အစုံ လေ့လာချင်သူများအတွက် www.shareme.com = ကွန်ပျူတာပညာရပ်များ၊ စီးပွားရေးပညာရပ်များအပါအ၀င် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များအကြောင်းစုံလင်စွာလေ့လာရန် http://search.imesh.com = ဒီဆိုက်မှာ ဆော့ဝဲလ်တွေအများကြီး free ဒေါင်းလို့ရတယ် http://www.filehippo.com/ = စုံလင်တဲ့ Free Software ဆိုဒ်ပါ ။ လိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသာ နာမည်ရိုက်တဲ့ပြီးရှာလိုက်ပါ http://www.picget.net = မိမိဓါတ်ပုံတွေကို ဘောင်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အလှပြုပြင်နိုင်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပိုတိုဆောဖ့်ဝဲလ်တွေပါ ♥ ♥ ♥ နည်းပညာ ဖိုရမ် လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ http://www.mmgeeks.org/forum/ = MM GEEKS= နည်းပညာဖိုရမ်များဖတ်ရှုရန်။ http://www.mmso.org/ = MMSO= ဖိုရမ်မှဗဟုသုတများရှာဖွေရန်။ www.aask.my-mm.org/ = MYANMAR OVERFLOW= ဗဟုသုတရစရာအမေးနှင့်အဖြေများ။ www.amyanmaritpros.com/ = MYANMAR IT PROFESSIONAL= နည်းပညာလေ့လာရန်။ www.mysteryzillion.org/ = MYSTERY ZILLON FORUM= နည်းပညာများဆွေးနွေးရန်။ www.problemclean.ning.com/ = MYANMAR IT DEVELOPMENT= နည်းပညာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့။ http://www.myanmartutorials.com/ = MYANMAR TUTORIALS= ကွန်ပျူတာနည်းပညာများလေ့လာရန် http://www.mmphotoshop.net/ photoshop သင်ခန်းစာ များလေ့လာနိုင် ပါသည်။ .. http://www.knowledgewar07.blogspot.com/ နည်းပညာ နှင့် E-books http://www.thanlonnge.com/ နည်းပညာ ♥ ♥ ♥ အော်တိုကတ်နည်းပညာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ http://cadmyanmar.blogspot.com/ = CAD MYANMAR = အော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://www.creativelayer.net/ = CREATIVE LAYERအော်တိုကတ်နည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://autocaddrawing.blogspot.com/ = အော်တိုကတ်ရေးဆွဲနည်း ပညာများလေ့လာရန်။ www.engineer4myanmar.com/search/label/AutoCAD/ = ENGINEER4MYANMAR အော်တိုကတ်လေ့လာရန်။ http://chan09.blogspot.com/ = CHAN 2009 = အော်တိုကတ်လေ့လာရန်။ ♥ ♥ ♥ ဓါတ်ပုံနည်းပညာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ http://www.yoeyar.com/ = ရိုးရာ= myanmar cg art gallery http://www.mdasociety.com/ = MYANMAR DIGITAL ART SOCIETY= ဓါတ်ပုံနည်းပညာများလေ့လာရန်။ www.myanmarlensman.com/ = MYANMAR LENS MAN = မြန်မာ့ဓါတ်ပုံပညာများလေ့လာရန်။ http://99nagar.multiply.com/ = ဒီဇိုင်နာနဂါး = ဓါတ်ပုံဒီဇိုင်းပညာများလေ့လာရန်။ www.photoshoproadmap.com/ = PHOTOSHOP ROAD MAP = photoshop လေ့လာရန်။ www.mmphotoshop.net/ = MM PHOTOSHOP = mm photoshop tutorials www.myozawlin23.blogspot.com/ = မျိုးဇော်လင်း = graphic design ♥ ♥ ♥ ၀က်ဒီဇိုင်းနည်းပညာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ http://www.zack-notes.net/ = ၀က်ဒီဇိုင်းနည်းပညာများလေ့လာရန်။ http://www.phpmyanmar.com/ = PHP MYANMAR= ၀က်ဒီဇိုင်းနည်းပညာများလေ့လာရန်။ ♥ ♥ ♥ မြန်မာဝက်ဆိုက်လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ http://allmyanmarblogs.blogspot.com/ = ALL MYANMAR BLOGSမြန်မာဘလော့များရှာဖွေရန်။ www.sharbar.net/ = SHARBAR = မြန်မာဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်။ www.searchmyanmar.com/ = SEARCH MYANMAR = မြန်မာဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်။ http://webdirectory.all-channel.com/ = ALL CHANNEL = မြန်မာဆိုက်များကိုရှာဖွေရန်။ http://myanmardaily.net/ = MYANMAR DAILY ဆိုက်အမျိုးမျိုးမှနေ့စဉ်ဖတ်စရာများ။ ♥ ♥ ♥ နည်းပညာ သတင်းလွှာ လမ်းညွှန် ♥ ♥ ♥ http://www.worldwidemyanmar.com/ = WORLD WIDE MYANMAR= နည်းပညာသတင်းများဖတ်ရှုရန်။ http://www.knowledgebridge.net/ = KNOWLEDGE BRIDGE= နည်းပညာမဂ္ဂဇင်းဖတ်ရှုရန်။= www.onlineictreader.com/ = မြန်မာအိုင်စီတီသတင်းများဖတ်ရှုရန်။ www.myanmarinternetjournal.com/ = မြန်မာအင်တာနက်ဂျာနယ်
♥ ♥ ♥ ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးဝင်သည့် စာအုပ်များ ♥ ♥ ♥
http://www.mediafire.com/?ememzwhndzm = Gmail ရဲ့လှုိူ့ ဝှက်ချက်တွေသိချင်ရင် http://www.mediafire.com/?noziemyl5yj = GTALK နှင့်ပက်သက်သမျှ http://www.mediafire.com/?050ltj4kgkd = လွယ်ကူစွာဂျီမေးနှင့်ဂျီတော့အသုံးပြုနည်း http://www.mediafire.com/?yyyzjylj2gy = ဂူးဂဲလျို့ဝှက်ချက်များ http://www.mediafire.com/?tzdqjdmemdj = ၀က်ဒီဇိုင်းလက်တွေ့သင်ခန်းစာများ http://www.mediafire.com/?xagz1meq9yn = မြန်မာဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် http://www.mediafire.com/?dgxzdjwdrmd = ၀က်ပိတ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်း http://www.mediafire.com/?w3cdqdzwmmx = HTML မိတ်ဆက် http://www.mediafire.com/?zjcjv2dnrso = ဘလော့ဂါနှင့်ဆိုက်ဘာအတိုက်အခံသမားများ လက်စွဲ http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = PHOTOSHOP NOTES(2) အကြောင်း http://www.mediafire.com/?p07vsb70gmrk9q5 = ADOBE PHOTOSHOP CS (မြန်မာ) http://www.mediafire.com/?52q0ew2umzg = TIPS AND TRICKS OF PS CS4 (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?wlzgykyjmjw = MAYA AND PHOTOSHOP (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?0yxwwztxf1k = ADOBE PHOTOSHOP 7.0 http://www.mediafire.com/?twdjnizznnu = ဖိုတိုရှော့မှတ်စုများ http://www.mediafire.com/?jd0hmmzdqdj = ပုံရိပ်များရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသဘာဝ http://www.mediafire.com/?ijjgjjvz3t3 = ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းသင်ခန်းစာ http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = PC MECHANIC http://www.mediafire.com/?ytoevqnnqwy = ပီစီတစ်လုံးတပ်ဆင်ရန်ရွေးခြယ်ခြင်း http://www.mediafire.com/?qatznyhmycx = ကွန်ပြူတာသိပံ္ပ္ပမိတ်ဆက် http://www.mediafire.com/?dluzztilwmb = ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးမှ ကွန်ပျူတာပြင်ပါ http://www.mediafire.com/?qnji1uh2qnj = ကွန်ပျူတာအကြောင်းအသေးစိတ်သိစရာ http://www.mediafire.com/?zxjnayfxynw = ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်း http://www.mediafire.com/?ksqsyeashheupib = အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်း အခြေခံနည်းစနစ် http://www.mediafire.com/?qndaxgdede0 =ကွန်ပျူတာအမေးအဖြေ http://www.mediafire.com/?wswd9ayna1t = ကွန်ပျူတာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် http://www.mediafire.com/?z0jmgzdyggq = ကွန်ပျူတာအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် http://www.mediafire.com/?dzsiyudsbh3 = သတင်းအချက်အလက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ် http://www.mediafire.com/?twnftxnvxtr = ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စာ http://www.mediafire.com/?njiycdz4htw = တီထွင်မှုမှော်ဝိဇ္ဇာကြီးအယ်လ်ဗာအယ်ဒီဆင် http://www.mediafire.com/?ymzb9ubyzmm = ၂၁ရာစုဂူးဂဲနှင့်ပြောင်းလဲသွားသောအင်တာနက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုလေ့လာခြင်း http://www.mediafire.com/?cigqtwgskzx = တီထွင်မှုများ http://www.mediafire.com/?wymogtik4cu = သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ http://www.mediafire.com/?kv1qe99nr8id3gb = TWENTY THINGS I LEARNED ABOUT BROWSER AND INTERNET (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?fflsbgmr77i9rbo = WEB DESIGN HTML AND CSS http://www.mediafire.com/?jhh7u5ksx3hum5m = AUTOCAD 2005 http://www.mediafire.com/?uv7gv93w69ykx13 = AUTOCAD 2002 http://www.mediafire.com/?udt25jcc8o5f3d2 = MICROSOFT WORD 2002 http://www.mediafire.com/?yzyummzde2m = MICROSOFT EXCEL 2002 http://www.mediafire.com/?yidm0udqzuz = WINDOW INSTALLATION (မြန်မာ) http://www.mediafire.com/?gzzntmzzcxm = INTRODUCING MAYA 2008 (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?zzydzvnm0dd = MS FRONT PAGE 2002 http://www.mediafire.com/?mj2nzlrzw3v = BASIC WORD PROCESSING (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?niyytyqwwtj = COMPUTER DICTIONARY (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?quhmiu0gomy = LEARNING GUIDE FOR http://www.mediafire.com/?gzt2tycucb3 = VIDEO CONFERENCING SERVER (မြန်မာ) http://www.mediafire.com/?d1dkxscgcsz = SMALL OFFICE OR HOME OFFICE http://www.mediafire.com/?uu0mj6i2dyd6nkf = REMOTE DESKTOP ENVIRONMENT http://www.mediafire.com/?wgjxwdznend = PROTECTING FROM http://www.mediafire.com/?cclacsgsywd = NETWORK ADDRESS TRANSLATION http://www.mediafire.com/?wan1g45myhw = CMS AND DYNAMIC PORTAL ENGINE http://www.mediafire.com/?wjzrnumnmtg = INTERNET CONNECTION SHARING http://www.mediafire.com/?nyf3dwiezmz = E-MAIL SERVER http://www.mediafire.com/?jmzmewt9cm1 = DOMAIN NAME SYSTEM SERVER http://www.mediafire.com/?gzdzlffuzqz = LEARNING CSS-2http://www.mediafire.com/?eoe2jwhniyd = MS POWER POINT 2002 http://www.mediafire.com/?znjmdeh3zkd = LEARNING CSS http://www.mediafire.com/?myzzm4tjnh4 = HARDWARE AND NETWORK http://www.mediafire.com/?44ykzzz1m2m = VISUAL BASIC 6.0 http://www.mediafire.com/?jnmgjymmz1u = VB 6.0 TUTORIALS (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?l07778b87waz8os = MICROSOFT ACCESS 2002 http://www.mediafire.com/?d2ikzdwunad = LEARNING HARDWARE IN5MIN http://www.mediafire.com/?xo9txgs54c2cytf = BUILDING WEBSITES WITH JOOMLA http://www.mediafire.com/?bb71n4lq41v045t = JOOMLA QUICK START (အင်္ဂလိပ်) http://www.mediafire.com/?mfmegtmadyx = FrontPage2002 (မြန်မာ)
http://www.myanmarbook.com/ Myanmar Book .. http://www.myanmarelibrary.com/ Myanmar E library http://myanmarnetworknews.com/ Online myanmar ebook http://www.myanmarbookshop.com/ Myanmar Book Shop http://www.foreverspace.com.mm/ Foreverspace http://www.sagarwarmyae.org/ စကားဝါမြေ စာကြည့် တိုက် .. http://www.manorhary.com/ .:Manorhary:. The popular Author Novelist and Poet of Myanmar http://www.bookmyanmar.com/ Myanmar Online Book Store http://www.myanmardirectory.net/ Myanmar Directory :: http://www.dhamadarna.net/ Dhamadarna.NET http://www.knowledgewar07.com/ Blog,Computer,Books,Software တွေကိုအဓိက တင်ပြပေးပါမည်. .. http://existencemgz.wordpress.com/ ဖွဲ့တည်ရာ မဂ္ဂဇင်း အကောင်းဆုံး မြန်မာစာပေ ဘလော့ဂ်ဆု http://www.dhammaransi.net/ Dhamma Ransi – Gateway to Theravada Buddhism http://www.perfectmagazineonline.com/ home.php Perfect Magazine Online http://www.myawady.net/ Myanma Reference, tradition culture books : literature resources … http://www.aimwell.org/ Association for Insight Meditation http://www.yawainwe.net/ Ya Wai Nwe http://www.kayinstate.com/ Myanmar Book(KayinState) http://www.shwehinthar.com/ Dhamma E-book in maynmar and english http://ezine.mywebdigest.net/mwd/ My WebDigest http://www.yellowpagesmyanmar.net/ Myanmar Yellow Pages, Myanmar Exporters, Importers, Manufacturers … http://www.dhammayaysin.com/ ဓမ္မရေစင် http://ebooks.mmblogs.net/ မြန်မာအီးဘွတ်များကို တစ်စုတစ်စည်း တစ်နေရာထဲမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ရန် http://www.myanmaryellowpages.biz/ Myanmar Yellow Pages – Myanmar Business Directory, Myanmar Telephone … http://www.shwesagar.com/ Shwe Sagar http://weenyinthit.iblogger.org/ ၀ိညာဉ်သစ်စာအုပ်စင် နဲ့ ရောက်တက်ရာရာများ စာအုပ်များနှင့်သီချင်းလေးများ http://shweone.wordpress.com/ Shwe One http://www.cherrythitsar.org/ Cherry Thitsar http://www.mmopenlibrary.com/ MMopenlibrary(Myanmar Book) http://www.dhammaknowledge.com တရားစာအုပ်များ .. http://www.myautoosayadaw.com/ အရှင်ဝါယာမိန္ဒ တရားတော်များ http://www.kyiaye-literature.blogspot.com/ ကြည်အေး
New Light Myanmar Ahlin Kyaymon News Entertainment Places People Arts,Literature Lifestyle Religion Travel Conference MRTV3Ministries Missions Foreign Missions Organizations
ပြည်ပ ဒေါ်လာစား အတိုက်အခံများဘလော့
Posted by talwinsuccess at 6:21 PM
Window တက်လာရင် မိမိနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတက်လာအောင် လုပ်...
ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲ အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD . . . Z အ...